Latest: Rabshadii ka aloosnaa London oo ku fidey degmooyin hore Sawiro+Video – SBC
Latest: Rabshadii ka aloosnaa London oo ku fidey degmooyin hore Sawiro+Video
Rabshadaha ba’an ee ka aloosan magaalada London ayaa caawa ku faafay degmooyin hor leh oo ka tirsan Waqooyiga, Bariga & Galbeedka magaalada, waxaana la soo sheegayaa in ugu yaraan 215 qof oo ka mid ah kooxaha rabshadaha wada xabsiga la dhigay.
Wariyeyaasha SBC ee magaalada London ayaa soo sheegaya in Degmooyinka rabshaduhu ku faafeen ay ka mid yihin Lewisham, Peckham, Deptrod, Craydon oo ka tirsan Bariga Koonfureed ee magaalada London.
Degmada Harrow ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa inay ka dhacaan rabshado saleysan bililiqo, iyadoo Koonfurta London degmada ku taal ee Clapham, in dukaamo waa weyn la boobay gaar ahaan dukaanka caanka ah ee Debenhams store sidoo kale dukaamada ku yaal xaafada Lavender Hill ee degmada Ealing ayaa boob xoogan lagula kacay.
Mid ka mid ah dukaamada lagu bililiqaystey degmada Croydon ee Bariga Koonfureed ee magaalada London ee la boobay ayaa ahaa dukaan caan ah oo lagu iibin jiray qalabka guryaha kaasi oo jirey 100 sano.
Degmada Fulham gaar ahaan agagaaraha Wandsworth Bridge waxaa laga soo sheegayaa rabshado boob wata sidoo kale Woolwich oo ka tirsan Bariga Koonfureed ee London dhac ayaa laga soo sheegayaan.
Beerta caanka ah ee Haven Green park oo ku taal degmada Ealing dab ayaa la qabadsiiyey sidoo kale dukaan weyn oo ku yiil Ealing oo lagu magacaabo Tesco ayaa si xun loo baabi’iyey
Ra’isalwasaare Cameron oo qasab London ugu soo laabtey.
Aqalka Downing Street ee looga arimiyo wadanka Britian waxaa caawa laga soo saarey war lagu sheegay in Ra’isalwasaare David Cameron uu dalka dib ugu soo laabanayo isagoo ku maqnaa fasaxa summer-ka (Holiday), warar hore ayaa sheegayey in Cameron aanu soo afjari doonin socdaalkiisa shakhsiga ah, waxaase dib ugu soo laabtey London Raisalwasare kuxigeenka Nick Cleg & xoghayaha amuuraha gudaha Theresa May kuwaasi oo sheegay inay la tacaalayaan rabshadaha hareeyey magaalada London.
Mayorka London Boris Johonson oo isaguna ka maqnaa magaalada London kuna jirey fasaxa holiday-ga ayaa dib ugu soo laabanaya London.
Birmingham oo rabshado laga soo sheegayo
Wararka ka imaanaya magaalada Birmingham oo ah caasimada labaad ee UK ayaa laga soo sheegayaa rabshado ay geysteen kooxo dhalinyaro ah, iyadoo dukaamo loo geystey dhac & boob.
Muuqaalada laga soo duubay rabshadaha London hoos ka daawo iyagoo badan.